မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): Password ခိုးရာမှာ သုံးနိုင်သလို ကွန်ပျုတာလုံခြုံရေးကို စောင့်မယ့် ဆော့ဝဲ
Password ခိုးရာမှာ သုံးနိုင်သလို ကွန်ပျုတာလုံခြုံရေးကို စောင့်မယ့် ဆော့ဝဲ
ဒီဆော့ဝဲလေးက အလွယ်ပြောရရင် ပတ်စ၀ပ်ခိုးတဲ့ ဆော့ဝဲပါ ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လို
ဘယ်ပုံအသုံးချမလဲဆိုပီး သုံးတတ်သလောက် အကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်စက်ကို
ဘယ်သူက ဘယ်အချိန် ဘာတွေသုံးသွားလည်း ဘယ်ဝက်ဆိုဒ်တွေဝင်ကြည့်လဲ
ပတ်စ၀ပ်တွေနဲ့မှတ်ထားပါတယ် ။ချက်တင်လုပ်တာတွေကိုလည်း ပြန်ကြည့်စေဖို့ 
မေးလိပ်စာတစ်ခုနဲ့ အမြဲတမ်းပို့ ပေးနေတာမို့အဆောင်မှာ ကိုယ့်ကွန်ပျုတာမေ့ခဲ့
ဘယ်သူဘာလုပ်လဲဆိုတာ ကိုယ့်ဆီကို မေးပို့ ပါလိမ့်မယ် ။ စက်မှာ ဒီဆော့ဝဲထည့်
မေးလိပ်စာမှာ ကိုယ့်အကောင့်ထည့် ။ ဒါဆို တစ်ယောက်ယောက်က သုံးပြီဆိုင်ရင်
သူသုံးနေတဲ့ဟာ အကုန်ပို့ ပေးပါတယ် ပြန်ရှာစရာမလိုပဲ ကိုယ့်ဆီ မေးနဲ့ ပို့ နေတာ
မေးစစ်လိုက်တာနဲ့ပတ်စ၀ပ်တွေ နဲ့ လိပ်စာတွေက အလိုလိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ ပတ်စ၀ပ်ခိုးချင်ရင်သို့ မဟုတ် ဒီလိုဆော့ဝဲထည့်ထားတဲ့စက်မှာ သုံးမိခဲ့ရင်
ကိုယ့်ပတ်စ၀ပ်တွေ အကောင့်တွေ သက်ဆိုင်ရာလူဆီ အလိုလို ရောက်နေ ပို့ နေ
အစီရင်ခံနေတာမို့အန္တရယ်များမယ်ဆို များပါတယ် ။ ကိုယ့်စက်မှာ ထည့်ထားရင်
ကိုယ့်ကွန်ပျုတာ သူများသုံးရင် သူများပတ်စ၀ပ်က အလိုလိုကျန်နေခဲ့မှာဆိုတော့
လွယ်တော့ မလွယ်ဘူး ။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာများ ထည့်ထားခဲ့ရင် အားလုံးကုန်ပီပဲ
အဲ့တော့ စိတ်မချရတာကတော့ မချရပါဘူး ။ ရုံးတွေမှာလည်း သူဌေးက ဒီဟာသုံး
ဘယ်သူတွေ ဘယ်ဝက်ဆိုဒ်ဖွင့်လည်း စစ်မယ်ဆို စစ်လို့ ရတယ် ။ ဆိုးတာကြီးက
ပတ်စ၀ပ်တွေ ချက်တင်တွေပါ ပုံရိုက်ပီးမှတ်ထားတာမို့ ရှောင်မလွတ်တဲ့နည်းပါ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒိလိုဆော့ဝဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မျှဝေပေးတာနော် လေ့လာဖို့ 
နားလည်စေဖို့ ပါ ။ သုံးချင်တဲ့သူများ ဒီဆော့ဝဲထည့်ပီး လိုင်းချိတ်လိုက် ပီးပီးဆို
အဆောင်က ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို သုံးခိုင်းလိုက်.။ မသိတဲ့သူကတော့ လစ်ပီ
ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သုံးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ .လေ့လာဖို့ 
အောက်ကလိပ်စာမှာ ယူသုံးကြည့်ပါ ။အထဲမှာ ကီးဖိုင်ပါတယ်။Full Version ပါ..။
Downoad - Key Prowler Key Logger Full Version
KeyProwler is truly an all in one keylogger solution. Start automatically watching every chat, monitor every website, and control it all easier than any other spy software on the market. No other spy software gives you the security of knowing you will be able to collect every screenshot and every keystroke with just the click ofabutton.
Every keystroke from popular chat, online email and social sites is recorded. Including Myspace, Facebook, Hotmail, Yahoo Messenger, MSN Messenger, AIM and any other programs, in addition to any website or program that is used.
Author Anonymous at 11:38:00 PM
Labels: Gmail Hacking ပညာ, Hacking နည်းပညာများ, Key Logger
password pyan ma phoe buu pyit nay tel brother
a dar balo loat ya ma lel